Yiya kumaQhinga kunye neMiceli mngeni kuThengiso lweeholide kwiPost-Covid Era | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 19, 2020 NgoLwesine, Novemba 19, 2020 Unnathi Rayaprolu
Ixesha elikhethekileyo lonyaka lilungile ngekona, ixesha apho sonke sijonge phambili ekuphumleni kunye nabantu esibathandayo kwaye okona kubaluleke kakhulu kukuzibandakanya kwiimfumba zokuthenga ngeholide. Nangona ngokungafaniyo neeholide eziqhelekileyo, lo nyaka umi ngokwahlukileyo ngenxa yokuphazamiseka okusasazekileyo yi-COVID-19.
Ngelixa ilizwe lisasokola ukujongana nokungaqiniseki kunye nokubuyela kwimeko yesiqhelo, izithethe ezininzi zeholide ziya kuthi nazo ziqwalasele utshintsho kwaye zinokujongeka ngokwahlukileyo kulo nyaka njengecala ledijithali lokubhiyozela ezi holide liquka isimilo esitsha.
Iiholide ezikhulu kuwo onke amaGlobe
umthombo: Isikhokelo sokuThengisa ngeeholide seMoEngage
Imiceli mngeni yokuThengisa ngeholide ngo-2020
Kwi-2018, ukuthengiswa kwexesha leholide kwintengiso kunye ne-e-commerce kugqithile yezigidigidi zeedola phawula okokuqala ngqa. Nangona kulo nyaka intengiso isenokucotha kodwa ukuba nesicwangciso esiliqili kunye namajelo anokunceda iimveliso zityhale iimveliso ngamajelo edijithali.
Ngelixa e-US nase-Yurophu-ngolwe-Sihlanu oMnyama, uMvulo we-cyber, kunye neKrisimesi kunye nokuThengiswa koNyaka oMtsha zithandwa kakhulu e-South East Asia nase-India-eDiwali, 11:11 [Intengiso yoSuku olunye) (ngoNovemba), Harbolnas (Disemba), kunye no-Black Friday balawula abathengi.
Ngotshintsho kwindlela yokusetyenziswa, ukhetho lomsebenzisi kunye namandla okuthenga apheleleyo kubathengi, iimveliso kufuneka zitshintshe iindlela zabo zokuthengisa ngeholide ukulungiselela iimfuno ezintsha. Nantsi eminye yemiceli mngeni ngenxa yobhubhane onokuthi uthintele ukufumaneka kweNtengiso yeholide:
Abathengi bazi ngakumbi ngexabisoAbathengi ngakumbi iimillennials bayitshintshile indlela yabo yokuchitha kwaye baye bashiya iswipers baya kwi-savers. Abathengi baya kuba nolwazi ngexabiso kwaye banganyanzeleki ngelixa bethenga.
Imiba yokuhanjiswa kweenkonzo: Ngokutshixwa kwemiqobo kunye nokuthintelwa kokuhamba kwihlabathi liphela, ulungiselelo lweshishini leentengiso lubethwe kakhulu. Ngo-Epreli, ukuthengisa kwintengiso e-United States kwehle nge-16.4% 3 ngenxa yemicimbi yokuthenga. Iingxaki ezinjengokunqongophala kwabasebenzi, izithintelo kwezothutho, kunye nokuvalwa kwemida zongeze ubunzima bokuhanjiswa kwexesha elide.
Ukungafuni ukuthenga ivenkileAbantu balumkile kwaye ikakhulu malunga nokuya evenkileni. Ukuthengwa kwedijithali kunye nokuthengwa kwi-Intanethi kuthabathe isantya. Nokuba iibrand ziyawubona lo mkhwa kwaye zibonelela ngezaphulelo ezinzima zokuthenga kwi-Intanethi kugcina ukhuseleko lwabathengi engqondweni.
Buyela emva kwiQhinga leHolide
Iiholide zihlala zijikeleza kwiimvakalelo kunye nokunxibelelana kwabantu. Iimpawu kufuneka zongeze ezo zing zingaphezulu kwizicwangciso zazo zonxibelelwano ukuze abathengi babambeke kwiimveliso zabo. Ngokwe- Uphononongo olwenziwe liZiko labaSebenzi laseNtabeni eliseUnited Kingdom, amaphulo anomxholo weemvakalelo owenziwe kabini kunye nalawo anengqiqo kuphela (31% vs. 16%). Njengomthengisi, kuya kufuneka uqinisekise ukuba amaphulo akho ajolise kuvuyo, kumanyano nakwimibhiyozo. Nazi izicwangciso ezimbalwa zeemveliso ekufuneka zamkelwe:
Ukonyuka kokuhambelana kokuthathwa kwe-curbside: Unikezelo olungenakunxibelelana ngundoqo; abathengi bajonge phambili kwiimveliso ezithatha amanyathelo okhuseleko afanelekileyo awathi ekugqibeleni akhe nokwakha ukuthembana. Ukukhethwa kwamacala okuthambeka kuya kuba nkulu ngeli xesha leholide ukunqanda ukungxamiseka kwivenkile kunye nemigca yokulinda.
Gxila kwintengiso yeselfowuni- Ngoku ka IiAdobe Ukuphindaphinda iholide ka-2019, iipesenti ezingama-84 zokukhula kwe-e-commerce ezenzelwe ixesha leholide eMelika zenziwa ngee-smartphones. Ukujolisa ekugxilwe kuko kunye nokunikezelwa kwendawo okusekwe kunokonyusa ukubandakanyeka kweempawu kunye nokuthengisa.
Unxibelelwano olunobubele: Le ayisiyongqondo kwaye kufanelekile ukuyenza. Iimpawu kufuneka zigxile kwiimvakalelo kwaye ziphephe ukuthengisa ebusweni kunye nokufihla umyalezo. Kufuneka bahlangane ngokubambisana nabathengi kula maxesha anzima.
Gxila kuDijithali: Ukwamkela amajelo edijithali lukhetho olucacileyo kubathengisi. Ukuthengisa kwintengiso kwi-Intanethi kwakuphezulu ngoJuni xa kuthelekiswa nomndilili wangaphambi kobhubhane ngoFebruwari.
Fikelela kubasebenzisi abaninzi ngezaziso ezityunjiweyo zokutyhalaUmsebenzisi ophakathi ufumana izaziso ezingaphezu kwama-65 ngosuku! Amanqaku kufuneka alwe nawo kwaye aphakamise umdlalo wabo wesaziso. Sukuvumela izaziso zakho zilahleke kwitreyi yesaziso, ume ngaphandle ngezityebi kunye nezenzelwe wena ekunzima ukuphoswa.
Ukuphucula isicwangciso sentengiso esiphathwayo kwangaphambi kwexesha kunye nokusebenzisa indlela ye-omnichannel kunokunceda ukwandisa ukubandakanyeka kwinqanaba elikhulu kunye nokunikezela ngezaphulelo kunye namaxabiso kubathengi. Ukwenza ngokwezifiso kunye nokwenza ubuqu kuya kuphumelela kakhulu ngeli xesha leholide. Vumela ukuba iholide iqale!
Khuphela isiKhokelo seNtengiso seholide seMoEngage
tags: 11: 11Krisimesii-covid-19ukuthabatha i-curbsideukukhangelaijografi yomhlabaiihabolnasisikhokelo sentengiso ngeholideamaxesha eeholideurhwebo mobileIsicwangciso sentengiso esiphathwayomoengageEmva komhlathanaizaziso zokutyhalaIvenkileemazantsi mpuma eAsia iiholide